Umtshini weHifu, umatshini wokulwa nokuguga, umatshini weLaser yobuhle - Sincoheren
Yasekwa ngo-1999, iBeijing Sincoheren S&T Development co., Ltd. yenye yezona zinto ziphambili ekwenzeni izixhobo zobuhle eziphucukileyo kunye nezixhobo zonyango...
Umgangatho ngumphefumlo we-enterprise.Yasekwa ngo-1999, iBeijing Sincoheren S&T Development co., Ltd. yenye yezona zinto zihamba phambili ekwenzeni izixhobo zobuhle eziphucukileyo kunye nezixhobo zonyango. Iimveliso zethu zithengiswa kakhulu kwizithambiso, i-aesthetics kunye nemimandla yedermatology. Imveliso iphantsi kwenkqubo yomgangatho we-ISO13485 kunye nomdlalo kunye nesatifikethi se-CE.
Itekhnoloji yamva nje ye-IPL-SHR kuphuhliso lwesizukulwana sethu sesithathu senkqubo yonyango yokukhanya kwe-pulse ekrelekrele, kusetyenziswa ubuchwepheshe be-OPT-perfect pulse. Unyango oluninzi olwahlukeneyo ludibanisa kunye nemowudi eyahlukeneyo ukuhlangabezana neemfuno zabathengi.
Q-Utshintshile Nd Yag Laser Machine
I-Q-Switched Nd: YAG inamandla aphezulu aphezulu kunye ne-nanoseconds-level pulse wide. I-Melanin kwi-melanophore kunye neeseli ezenziwe nge-cuticle zinexesha elifutshane lokuphumla elishushu. Inokwenza ngokukhawuleza i-granules encinci yamandla ekhethiweyo (i-tattoo pigment kunye ne-melanin) iqhume ngaphandle kokulimala kwezicubu eziqhelekileyo ezijikelezileyo. I-pigment granules eqhumayo iya kukhutshelwa emzimbeni ngenkqubo yokujikeleza kwegazi.
808nm 755nm 4064nm Wavelengths Diode Laser yokususa iinwele inkqubo
I-Razorlase diode laser idibanisa ubude obuthathu be-755nm 808nm 1064nm, enokufikelela ngokuchanekileyo nangokunzulu kwi-follicle yeenwele. I-melanin kwi-follicle yeenwele iya kukhetha kwaye ifunxe ngokupheleleyo amandla e-laser kwaye iya kutshisa. Ekugqibeleni, i-hair follicle stem cell iya konakala.